Shabakadda ESPN oo dhulka la dhacday Mesut Özil kaddib markii…. – Gool FM
Shabakadda ESPN oo dhulka la dhacday Mesut Özil kaddib markii….
Dajiye May 30, 2019
(Yurub) 30 Maajo 2019. Laacibka reer Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Özil ayaa xili ciyaareedkan inta badan waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa liita, waxaana ugu dambeeyay kulankii xalay kooxdiisa laga qaaday Europa League aan garoonka ka qaban wixii laga filayay.
Hadaba shabakadda ESPN ayaa dhulka la dhacday xiddiga reer Germany, waxayna soo qaadatay xogtiisa ku aadan gool caawinta xili ciyaareedka oo dhan, iyadoo la barbardhigtay Alexis Sánchez oo xili ciyaareedkiisii ugu xun ku qaadanaya Manchester United.
Shabkadda ESPN ayaa bannaanka soo dhigtay ceebta Mesut Ozil oo markale muuq-beelay, iyadoo Alexis Sanchez uu ka caawin batay xilli ciyaareedkan markii isbar-bardhig lagu sameeyey labada xiddig.
Mesut Ozil ayaa dhammaan xilli ciyaareedkan soo sameeyay kaliya saddex gool caawin kaddib 2420 daqiiqo oo uu soo ciyaaray.
Fashilka Ozil ayaa bannaanka yimid kaddb markii sheekadda ESPN ay la la bar-bardhigay Alexis Sanchez oo isna aan waqti wanaagsan ku qaadanaynin Man United, balse xiddiga reer Chile ee Sanchez ayaaba ka goolal caawin fiican Ozil waxaana uu soo sameeyay afar caawin xilli ciyaareedkan kaddib 1240 daqiiqo oo uu saftay.
Sanchez ayay si aad u xun ula dhaqmaan Taageerayaasha kooxdiisa Man United iyo guud ahaan kuwa Ingiriiska, balse waxa sidoo kale mudan Ozil sida shabakaddu leedahay kaddib xogtan bannaanka ay soo dhigtay.
Supercomputer oo saadaaliyay kooxda guuleysan doonta final-ka Champions League Tottenham iyo Liverpool
Halyeey kooxda Liverpool ah oo sheegay sababta ka dambeysa guulaha Klopp iyo Guardiola